भिडीयो Archives · sankhuwasavaonline
हिजोआज बिश्वको ध्यान सिरियामा छ । सामाजिक संजालमा यस्को तिब्र बिरोध भईरहको छ । सिरियामा जारी बमबारी र नरसंहारको विरोध गर्दे बिभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले सोमबार काठमाडौमा विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । काठमाडौको माईतिघरमा भेला भएका उनीहरुले सिरियामा जारी बमबारी र नरसंहार तत्काल रोक्न पहल गर्नुपर्ने जनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदद्वारा पारित युद्ध विरामको प्रस्ता...
काठमाडौं । युद्ध र जनआन्दोलनको बलले स्थापित गरेको लोकतन्त्रमा पनि आम नागरिक खुसी छैनन् । व्यवस्था फेरि पनि अवस्था नफेरिँदा जनआक्रोश झनै चुलिएको हो । सुशासन र सुव्यवस्था कायम हुन नसक्दा पहाड, तराईका ग्रामिण भेगका नागरिक देखि राजधानीका सडकमा भेटिनेहरुको साझा गुनासो छ । आधारभुत आवस्यकताका कुरामा समेत राज्य लाचार देखिँदा राज्य संचालकहरुप्रति आक्रोश स्वभाविक उठ्छ । तर विरोध र ...
कार्टुञ्ज क्रुको नयाँ म्युजिक भिडियो ‘कहिले होला’ युट्युब ट्रेन्डीङमा छ । ‘दर्शकहरुले अत्यन्तै मन पाराएको जोडी मध्ये एक हो सरोज अधिकारी र आष्मा विश्वकर्माको जोडी। सरोजले आश्मालाई भगाउने कथा रहेको भिडियोले यो खबर तयार पार्दा सम्ममा ३ लाख १९ हजार भन्दा धेरै दर्सक पाइसकेको छ । भने युट्युब ट्रेन्डीङमा २ मा पर्न सफल भएको छ । दिपेन केसी र सुमिना लो ले आवाज दिएको उक्त गीतमा दिपेन क...
गायीका मेलिना राईको गीतमा नायिका प्रियंका कार्कीको अभिनय रहेको नयाँ गीतको भिडियो रिलिज भएको छ। ‘सपनीमा आउनेलाई’ बोलको गीतमा प्रियंका कार्कीलाई ५ दर्जन भन्दा बढी कोरसको बीचमा हेर्न सकिन्छ। गीतमा दिपेन्द्रनाथ शर्माको शब्द र बसन्त सापकोटाको संगीत छ। महाराज थापाको एरेन्जमा तयार भएको गीतको भिडियो राम्रो बनेको छ। भिडियोलाई सुदिप बराले खिचेका हुन् भने अर्जुन जिसीले सम्पादन गरेका हुन्।...
सुनिरहु लाग्ने चलचित्र ‘कान्छी’को तेश्रो तथा अन्तिम गीत रिलिज (भिडीयो )
चलचित्र ‘कान्छी’को तेश्रो तथा अन्तिम गीत रिलिज गरिएको छ । पहिलो र दोश्रो गीतलाई दर्शकहरुले अत्याधिक रुचाईरहेको समयमा चलचित्र निर्माण टीमले तेश्रो गीत रिलिज गरेको हो । ‘यो मन रमाउँदै’ बोलको गीतमा अञ्जु पन्त र युवराज चौलागाँईको स्वर, दिवाकर भट्टराईको शब्द र अर्जुन पोखरेलको संगीत छ । अप्पर मुस्ताङमा छायांकन गरिएको भिडियोमा दयाहाङ राई र श्वेता खड्कालाई फिचरिङ गरिएको छ । आकाश अध...
दुई लालबाबुको घम्साघम्सी, राउतले ‘हिन्दी भाषा नेपालको भाषा’ भन्दा पण्डित यसरी कड्किए (भिडियो)
नाम दुवैका ‘लालबाबु’ । तर, फरक पार्टीका, फरक धारणा राख्ने । धमलाको हमलामा ऋषि धमलाले उपयुक्त पात्र चयन गर्दै शो मा हाजिर गराए । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पण्डित प्रतिनिधिसभा सांसद हुन्, जसले शेखर कोईराला जस्ता कोइराला विरासत बोकेका काँग्रेसका खम्बालाई उनकै गृहक्षेत्रमा हराए । राउत भने प्रदेश नं. २ का मुख्य मन्त्री पक्का भईसकेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउ...
सुजनले एलिसालाइ ‘कसम मन पर्यो’ भने पछी …
प्रेम दिवसलाई लक्षित गर्दै गायक सुजन तिलेगा लिम्बुको आवाजमा समावेश ‘कसम मन पर्यो’ बोलको गीतको भिडियो पनि रिलिज भएको छ । गीतमा शब्द , संगीत र स्वर सुजनकै रहेको छ भने यसको भिडियोमा पनि उनी देखिएका छन् । भिडियोमा सुजनसँगै मोडल एलिसा राइको मोडलिङ छ । गीतमा लिम्बु कल्चर झल्काउने भेषभुषा पनि प्रयोग गरिएको छ भने संगीतमा पनि त्यस किसिमका प्रयोग भएको गायक लिम्बु बताउछन् । यस गीतको...
यसरी भयाे दीपक दीपाकाे बिहे !
काठमाण्डाै । हास्य कलाकार दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला अभिनित सामाजिक चलचित्र ‘हुन्नरी’ सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे चेतना जगाउन निर्माण गरिएको चलचित्रमा दीपक र दीपा प्रेमी प्रमीकाको रुपमा देखिएका छन् । शारिरीक रुपले अशक्त सोझो गाउँले केटाको भुमिकामा दीपकले अभिनय गरेका छन् भने दीपा, विधवा महिलाको भुमिका देखिएकी छिन् । माजलाई चुनौति दिँदै यि दुईले विवाह गरेर...
भिम र मुनाको ‘मन्दिर भाकी फुल चढाउछु’ बजारमा (भिडियो सहित)
काठमाडौं । लोकदोहोरी गायक भिम ज्वलन्त योगी र मुना थापाको सुमधुर आवाजमा केएस आर म्युजिक मार्फत “मन्दिर भाकि फुल चढाउछु” गीत बजारमा ल्याएका छन् । यस गीतमा छोटो समयमा चर्चाको शिखरमा पुगेका गायक भिम र मुनाको प्रेम सम्वादलाई यथार्थ रुपमा समेटने प्रयास गरिएको छ । अहिलेको समयमा स्वार्थगत माया लगाउंदै जस्लाई भेट्यो म तिम्रै हुँ भन्ने युवा जमात धेरै देखिन्छ, तर जिवनमा साथ र सहयोग गर्...